प्रम ओलीबिरुद्ध मोर्चाबन्दीः दाहाल, खनाल, नेपाल, गौतम एक कित्तामा ! – Satya Samachar
मुख्य पृष्ठ /समाचार/प्रम ओलीबिरुद्ध मोर्चाबन्दीः दाहाल, खनाल, नेपाल, गौतम एक कित्तामा !
१७ असोज, काठमाण्डौँ । आज (शनिबार) अपरान्हको लागि तय गरिएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बैठक यसपटक सामान्य नहुने छाँटकाँट छ ।
पार्टीभित्र संकट टरेको मात्र थियो तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी संग छलफल नै नगरी केही निर्णयहरु गरिदिनुभयो ।
यस हप्ता मुख्य सचिव र राजदूतको नियुक्ति भयो । त्यसमा ओलीले एकलौटी ढंगले निर्णय गरेको भन्दै नेताहरु असन्तुष्ट छन् । स्रोतका अनुसार वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल सबैभन्दा असन्तुष्ट हुनुहुन्छ । प्रचण्ड पनि यो विषयलाई गम्भीरताका साथ लिनुभएको छ ।
प्रचण्डले चाहिरहँदा पनि कुलमान घिसिङ नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशक पदमा पुनः नियुक्त हुन सकेका छैनन् । ओली कुनै हालतमा घिसिङलाई नियुक्त नगर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ । बरु घिसिङको नाम प्रस्ताव गरेकोमा ओली ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनप्रति असन्तुष्ट हुनुहुन्छ ।
मन्त्रिमण्डल पुर्नगठनको तयारी भइरहँदा ओलीले नियुक्त गर्न खोजेका केही नामप्रति प्रचण्डको असन्तुष्टि देखिइसकेको छ । नेकपा उच्चस्रोतका अनुसार ओलीले विगतमा प्रचण्डका अति निकट टोपबहादुर रायमाझी र हरिबोल गजुरेललाई मन्त्री बनाउन खोजेका छन् । प्रचण्डको गुट परित्याग गरेका लेखराज भट्ट पनि निरन्तरता पाउने भएका छन् । यसप्रति प्रचण्ड सन्तुष्ट हुनुहुन्न । उहाँ सबै मन्त्री हटाएर पुर्नगठनको पक्षमा हुनुहुन्छ ।
आफ्ना मान्छे धमाधम ओलीले तानेपछि प्रचण्ड नयाँ रणनीतिका साथ प्रस्तुत हुने बुझिएको छ । उहाँले अहाजको बैठकमा केही महत्वपूर्ण एजेन्डा अगाडि सार्ने तयारी गरेको बुझिएको छ ।
उता बामदेव गौतम पनि ओलीसँग चिढिएका छन् । आफूविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि गौतम मन्त्री बन्नबाट रोकिने सम्भावना बलियो भएको छ । त्यसले पनि गौतमलाई चिढ्याएको छ ।
यसरी आजका लागि तय भएको नेकपा बैठकमा कतिपय विषयमा चर्काचर्की हुने सम्भावना बढेको छ । नेताहरु आ आफ्नो तयारीमा छन् । प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध नेकपाभित्र फेरि मोर्चाबन्दी बनेको छ ।
अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालका अलावा उपाध्यक्ष बामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ एक ठाउँमा उभिएका छन् ।